घर पालतू जनावर अनुमति
तोते कोकुटो, फिलीपींसमा बस्ने इन्डोनेशिया, अष्ट्रेलिया र न्यु गिनीका पक्षीहरूका सबैभन्दा रोचक र लोकप्रिय प्रजाति हो। एक पालतू जनावरको लागि उनको माग इशारा, सुरुचिपूर्ण विदेशी उपस्थिति, सिक्नु र गतिशीलताको हास्यता द्वारा पूरी तरिकाले निर्धारण गरिएको छ। ककतूलाई कुरा गर्दै अत्यन्तै दुर्लभ छ, किनभने यो मानव भाषण पुन: पेश गर्न सक्षम छैन, तर त्यहाँ "जारी" वाक्यांशहरू वा शब्दहरूको एक सेट उदाहरणहरू छन्। पक्षीलाई सीता र रोचक आवाज बनाउन मनपर्छ। एक तोता बोल्ने बोकोटो कुनै परिवारको वास्तविक हाइलाइट हुनेछ।
यस प्रजातिको लगभग 20 प्रजातिहरू छन्, जुन शरीर, प्वाङ्ग र टाउकोको लम्बाइ र रंगमा निर्धारण गरिन्छ। चौंथो र सबैभन्दा लोकप्रिय प्रतिनिधिहरूलाई हेर्नुहोस्:
पहेंलो-फ्रक गरिएको काकुत्टो मान्छेको घरहरुमा सबै भन्दा साधारण छ, जो मालिकहरु को लागि उनको झुकाव र गहिरो स्नेहको कारण हो। तिनीहरू टाउकोमा पहेंलो चाउचाउको उपस्थितिमा छन्, आँखाको वरिपरि पनीरको अभाव र सामान्य आवरणको मुख्य सेतो रंग।
यो प्रजातिको सेतो-सामना, यस प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधिको मुकुट जस्तो देखिन्छ, र बर्फ-सेतो पिङ्गहरूसँग ढाकिएको छ। यो "हेड" कपडा हो जसले उसलाई मनपर्ने पालतू जनावर बनाउँछ।
काकाडु इन्का एक सबैभन्दा सुन्दर तोता र सबैभन्दा रंगीन कुकुरू मध्ये एक हो, एक प्लान्ट गुलाबी छाडको पादरी, पारदर्शी रातो र पहेंलो टाउको र बिल्कुल सेतो पंख संग एक ठाडो टाउको भएको छ।
गुलाबी पक्षीले खैरो वा धुलो पखाएका छन्, छाती, गाल, गर्दन र पेटमा रातो टन्ट संग पतला। जब चम्किलो सेतो टाउको देखा पर्यो, यसको रूबी-लाल केन्द्र देखिन्छ।
यसैले कुखुराले सबै प्रकारका हुक खोल्न सिक्न सिकाउँछ र सबै प्रकारका बोल्ट र नटलाई आफ्नो हार्ड चोटीको साथ निकाल्दछ, यसले आफ्नो घरको विश्वसनीयता र सुरक्षाको उचित हेरविचार गर्न आवश्यक छ, सम्भवतः यो आफ्नो पिडा बनाउने एक पिंजरे बनाउन लायक छ। कोकोटूको हेरचाहले विभिन्न प्रकारको अनाजको मिश्रणमा भोजन प्रदान गर्दछ, मास्सेलिका बाहेक, स्वच्छ र ताजा पेय पानीको उपलब्धता, तातो फल र सब्जिहरू खाँदै। ककटौ खेलहरू प्रारम्भिक उमेरबाट शावर अन्तर्गत स्नान गर्न वा नियमित स्प्रेबाट स्प्रेक गर्न सिकाइन्छ, जुन यो प्रजातिको लागि आवश्यक स्वच्छ अवस्था हो।
कोकूटको हानि मानिन्छ यसको चरित्र, अर्थात, शoutिंग र भित्रीपन, जसले पूर्णतया मालिकको मनोवृत्तिमा निर्भर गर्दछ। थप मालिकले पक्षीलाई चिन्ता र लामा पार्नेछ, अझ प्रायः यसले कठोर र घृणित आवाजहरु संग उसलाई चिन्नेछ। काकाडुले ग्राउन्ड र लामो समय सम्मको अपराधको बदला लिन सक्ने क्षमता फरक पार्छ।
अक्सर, पाल्तुको स्वास्थ्यको बिग्रेसन पक्षीको हेरचाह र पोषणको प्राथमिक नियमहरूको उल्लङ्घनको कारणको रूपमा हुन्छ। कोकोटको लागि यस प्रकारको रोगहरूद्वारा विशेषता गरिन्छ:
तोता रोग या अन्नितिसोसिस;
फोक्ससको कारणले संक्रमण;
भिटामिनको कमी र यति।
यस्तो निदान गरिएको क्रस कोटूले पर्यावरणको नियमित मर्मत उपाय, उचित आहार र स्वच्छता स्तरहरूमा नियमित मद्दत पुर्याउनेछ।
घरमा प्रजनन तोत्रा ​​कुकुर प्रजनन गर्न, तपाइँ पक्षीहरूलाई एक अनुभवी र ईमानदार बिरडरबाट खरीद गर्न आवश्यक छ जसले सेक्स र स्वस्थ जोडीको लागि ठीकसँग मेल खाने गर्दछ। मिलन प्रक्रिया एक विशाल बार्सिलोना वा कोठामा हुनुपर्दछ, र मालिकले दुवै सहभागीहरूको आक्रामकताको संकेतलाई ध्यानपूर्वक हेरचाह गर्नुपर्छ। अण्डा बिछ्याउने विशेष रूपले सुसज्जित घेरामा राख्नु पर्छ, जहाँ आमाबाबुले चरा पछ्याउँछन् (केवल एक जीवित जीवित)।
कुकुरहरूको लागि ओभरलेन्स
एक डायहार गर्न कसरी एक चिहुआहुहु लगाउनुहुन्छ?
बिल्लियोंका लागि मजेदार उपनाम
कुत्तों मा डेमोडेकोसिस - उपचार को बिरुद्ध मा उपचार मा महत्वपूर्ण सल्लाह
कुत्तों को लागि टीका
एक्वैरियम माछाको प्रकार
किकर स्पेनील को हेरविचार र रखरखाव
कुकुरहरूका लागि बुझाएका कपडाहरू आफ्नै हातले
बच्चा मा उल्टो सम्म खाए
पानीको खरानीबाट जाम
सूक्ष्मदर्शी कालोरी बाट सूप - एक स्वस्थ व्यञ्जनको लागि सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन
कसरी प्रति हप्ता5किलोग्राम हराउनु हुन्छ?
परिचित सामग्रीबाट आफ्नै हातबाट देशको फर्नीचर
गाउट र गठिया को लागि आहार
स्तनपान संग डमी
पर्दाहरूको लागि क्लैंप्स
छोराछोरीको चीजहरू के जस्तो देखिन्छ?
के म मेरो बच्चालाई ठण्डामा राख्न सक्छु?
दूतावासमा तान्जानियामा दूतावास
2014 को लागि फैशन मा कुन नाकहरू छन्?
बच्चाहरूको लागि बोर्ड खेल
बच्चाहरु लाई बिल्लियों को एलर्जी
सब्जियों संग बकसुआ
कसरी स्ट्रबबेरी पानी?
तल जैकेट एडिडास